နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > နားဆင်ရန် +ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - Flash သီချင်းများ+MP3သီချင်းများ+MP4သီချင်းများ(((10)))
ဟာဂျီသန်းလှဦး@hapmala 49 days ago
သက်တံကဗျာ Apr 26, '09 4:12 AM
၁။ နွေဦးကံကော် - ထူးအိမ်သင်
၂။ အလွမ်းရုပ်ရှင် - တင်ဇာမော်
၃။ ဘယ်တော့မှမပြောတော့ပါ - စည်သူလွင်
၄။ သက်တံကဗျာ - ထူးအိမ်သင်
၅။ အိမ်မက်ထဲကဥယျာဉ်နန်း - တင်ဇာမော်
၆။ အချစ်ပွင့်တို့ရဲ့ နန်း - စည်သူလွင်
၇။ ဆူး - တင်ဇာမော်
၈။ ၃၃လမ်းမ - ထူးအိမ်သင်
၉။ ကလေးရေ - စည်သူလွင်
၁၀။ အိမ်စောင့်သူ - တင်ဇာမော်
ထူးအိမ်သင် - ချစ်ခြင်းအားဖြင့် Apr 26, '09 4:12 AM
၂။ တုနှိုင်းမဲ့ ရတနာ
၁၁။ ငါတရားစီရင်တော်မူခဏ်း (Live)
ထူးအိမ်သင် - သက်ငြိမ် Apr 26, '09 4:12 AM
ထူးအိမ်သင် - မှော်ဆရာအိမ်မက် Apr 26, '09 4:11 AM
ချစ်သူပြောသောနွေအကြောင်း Apr 26, '09 4:10 AM
၈။ ၁၉ ကြိမ်မြောက်နွေ
Tags: ထူးအိမ်သင်, ဘိုဘို, ချောစုခင်
ထူးအိမ်သင် - နာရီပေါ်မှမျက်ရည်စက်များ Apr 26, '09 4:09 AM
၂။ ဝေးသွားတဲ့ အခါ
၄။ တစ်နေ့နေ့တော့ ချစ်လာလိမ့်မည်
၈။ သီချင်းလေး သက်သေ
၉။ နာရီပေါ်က မျက်ရည်စက်များ
၁၀။ ကြိုက်သလို လုပ်
၁၁။ နာရီရဲ့ သီချင်း
၁၃။ ရက်စက်စွာ ပြုံးတတ်သော
ထူးအ်ိမ်သင် - ၀န်ရိုးစွန်းမီး Apr 26, '09 4:09 AM
၆။ သူ့ ………အမုန်း
၇။ စကားလုံးတွေ သိပ်မလိုဘူး……….
ထူးအိမ်သင် - အမေ (သို့ ) မေတ္တာတော်ဖွဲ့Apr 26, '09 4:08 AM
၀၁ . ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါ……..အမေ
၀၂ . မေမေ……….
၀၃ . မေမေ………နေကောင်းလား
၀၄ . မေမေ…….ချစ်တဲ့…..သားကြီး
၀၅ . ကျေးဇူးပါ……..မေမေ
၀၆ . အရိပ်စစ်……….
၀၇ . အမေ……..
၀၈ . အမေ့ ရဲ့ ဒုက္ခအိုးလေး
၀၉ . အမေ့………အေးရိပ်
၁၀ . အမေတစ်ခု……..သားတစ်ခု
ထူးအိမ်သင် - အမှတ်တရ….ဒဏ်ရာသီချင်းများ Apr 26, '09 4:07 AM
၀၁ . ရွှေစင်……..
၀၂ . ဗမ်းဆင့် ဗန်ဂိုးတမ်းခြင်း
၀၃ . ချိုသော……..အရှူံး
၀၄ . ညီမျှခြင်း……….
၀၅ . သွား………………..
၀၆ . စကားလုံး မရှိတဲ့……….ကောင်းကင်
၀၇ . အိမ်…………..
၀၈ . အမှတ်တရ……….ဒဏ်ရာ
၀၉ . အလွမ်းရဲ့ ……….မီးလျှံများ
၁၀ . အထီးကျန်………..
၁၁ . ထာဝစဉ်…………..
ထူးအိမ်သင် - အစိမ်းရောင်နေ့စွဲများ Apr 26, '09 4:07 AM
၀၆။ အမှားအယွင်း ကပွဲ
၀၇။ မဟာဝီရ အို…ဗုဒ္မ
၁၀။ လမ်းပျောက်တဲ့ သား
ပဉ္စဂံတေးစု ၂ Apr 26, '09 4:06 AM
၁။ အိမ်မက်ထဲကရထားကြီး - ထူးအိမ်သင်
၂။ မျှော်သူပျော်ရစေ - စိုင်းထီးဆိုင်
၃။ လမင်းသီချင်း - ခိုင်ထူး
၄။ မျှော်လင့်ချက်ညကဗျာ - အောင်ရင်
၅။ ယောင်္ကျားကောင်း - စိုးလွင်လွင်
၆။ ငါတိမ်တိုက် - ထူးအိမ်သင်
၇။ ယုံတမ်း - စိုင်းထီးဆိုင်
၈။ ချစ်သစ္စာ - အောင်ရင်
၉။ အိမ်မက်ပန်းချီ - ခိုင်ထူး
၁၀။ အချော့တော်စကား - စိုင်းထီးဆိုင်
၁၁။ လောကကြီးရဲ့မောင်းနှင်အား - ထူးအိမ်သင်
၁၂။ ချစ်တဲ့ဘက်ကလူ - အောင်ရင်
၁၃။ ကာရန်မဲ့ခင်မင်မှု - ခိုင်ထူး
၁၄။ ရက်သတ္တပတ် - စိုးလွင်လွင်
Tags: အောင်ရင်, စိုးလွင်လွင်, စိုင်းထီးဆိုင်, ခိုင်ထူး, ထူးအိမ်သင်
ငြိမ်းချမ်းပါစေ Apr 26, '09 4:05 AM
၁။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ - အောင်ရင်+ဘိုဘို+ဖိုးဖန်
၂။ ချိုပေါ့ကျ - ထူးအိမ်သင်+ဖိုးဖန်
၃။ ရူးချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့ - ထူးအိမ်သင်+အောင်ရင်+ဘိုဘို+ညီပုလေး+ဖိုးဖန်
၄။ ချစ်သူဝေး - ဘိုဘို+ညီပုလေး
၅။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လမင်း - ထူးအိမ်သင်+အောင်ရင်+ညီပုလေး
၆။ နေရာချင်းသာလဲလိုက်ချင်တယ်- ထူးအိမ်သင်+ဘိုဘို
၇။ မျက်ကန်းချစ် - အောင်ရင်+ဖိုးဖန်
၈။ အကြောက်ဆုံးပါပဲ - အောင်ရင်+ညီပုလေး
၉။ နွေဝတ်ရုံ - ထူးအိမ်သင်+အောင်ရင်+ဘိုဘို+ညီပုလေး+ဖိုးဖန်
၁၀။ မင်းကိုလွမ်းတဲ့ည -ဘိုဘို+ဖိုးဖန်
Tags: အောင်ရင်, ထူးအိမ်သင်, ဘိုဘို, ဖိုးဖန်, ညီပုလေး
ထူးအိမ်သင် ရဲ့ “အမေ့အိမ်” သီချင်း ၅ပုဒ် Apr 26, '09 4:04 AM
သီချင်း ချစ်သူများအတွက် ကျွန်တော် စုဆောင်းထားတဲ့ ကိုထူးအိမ်သင် သီဆိုခဲ့တဲ့ အမေ့အိမ် သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲကို မတူညီတဲ့ စတိုင်လ် ၅ မျိုးနဲ့ ဆိုထားတဲ့ သီချင်း ၅ ပုဒ်ကို မျှဝေပေးလိုပါတယ်။ သေသေချာချာ နားထောင်ကြည့်ရင် ဆိုဟန် ကွဲပြားတာကို သိနိုင်ပါတယ်။
အမေ့အိမ် (Unplugged [Live]
အမေ့အိမ် (အနန္တမေတ္တာ၊ အကောင်းဆုံးမိဘမေတ္တာဘွဲ့တေးများ)
Z Share Download
ထူးအိမ်သင် - အတ္တ ပုံဆောင်ခဲများ Apr 26, '09 4:03 AM
၀၁. ရင်ခုန်ရင်……အချစ် (Duet with အိအိ)
၀၂. ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့ သမီး
၀၃. ဂျပ်စင် ထက်ကလရိပ်ပြာ
၀၅. ချစ်သူ လက်ဆောင်
၀၆. မြို့ ပြ….ညများ
၀၇. Rock N Roll အပျိုမ
၀၈. အမေ့ ရဲ့ ဒုက္ခအိုးလေး
၁၀. အစိမ်းရောင် တံခါးများ
၁၁. လွမ်းသူ့ အိမ်မက်
Download Link :.Mediafire
ထူးအိမ်သင် - စကားလုံး မရှိတဲ့ ကောင်းကင် Apr 26, '09 4:02 AM
၀၂. ဒဏ်ရာများပေါ်က ပြေးလမ်း
၀၃. ရင်ထဲက မိုးစက်များ
၀၄. ကောင်းကင်ထဲက မြစ်တစ်စင်း
၀၅. ချိုသော အရှုံးများ
၀၆. ချစ်သူရဲ့ မြစ်
၀၇. သန်းခေါင်ရံ အဆွေးများ
၀၈. စကားလုံးမရှိတဲ့ ကောင်းကင်
၀၉. အချစ်ရဲ့ လက်များနဲ့ 
၁၁. အသည်းကွဲခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ
၁၂. အမုန်းနဲ့ ရေးတဲ့ သီချင်း
၁၃. အလွမ်းရဲ့ မီးလျှံများ
၁၄. တစ်ကယ်လို့ များ
Download Link :ZShare
ထူးအိမ်သင် - မြို့ ပြလရောင် တမ်းခြင်း Apr 26, '09 4:02 AM
၀၁. မြို့ ပြလရောင် တမ်းခြင်း
၀၃. အိမ်မက်ထဲက နှုတ်ခမ်းလေး
၀၆. လေလွင့်ခြင်း လမ်းမများ
ထူးအိမ်သင် - တစ်နေ့စာအလွဲများ Apr 26, '09 4:01 AM
၀၁။ တစ်နေ့စာ အလွဲများ
၀၂။ တစ်သက်တာ အမှတ်တရ
၀၃။ အဓိမတိလမ်းက ခြေရာများ
၀၄။ သုံးရာသီ ချစ်သူ
၀၅။ ဒုက္ခကို ဆေးဆိုးထားတယ်
၀၇။ နွေဦး ကံ့ကော်
၀၉။ နှုတ်ဆက်မယ့် နွေ
၁၁။ ပထမ အသည်းကွဲဇာတ်လမ်း
၁၂။ ၂၄ နာရီ
၁၃။ ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး
၁၄။ တစ်နေ့စာ အလွဲများ
မဇ္ဈိမ Apr 26, '09 4:00 AM
၁။ မဇ္ဈိမ - ထူးအိမ်သင်
၂။ စကားတစ်ခွန်း - စည်သူလွင်
၃။ အဆွေးများ - ထူးအိမ်သင်+လေးလေးဝါး
၄။ လိမ္မော်လမ်း - လေးလေးဝါး
၅။ အားလုံးအတူ - စည်သူလွင်
၆။ ၀ိုင်းဝိုင်းလည် - စည်သူလွင်
၇။ ဘယ်သွားနေလဲ - လေးလေးဝါး
၈။ ကျွန်းကလေး - ထူးအိမ်သင်
၉။ မှော်ဆရာ - လေးလေးဝါး
၁၀။ မဇ္ဈိမ - ထူးအိမ်သင်+စည်သူလွင်
Tags: လေးလေးဝါး, ထူးအိမ်သင်, စည်သူလွင်
အနန္တမေတ္တာ - အကောင်းဆုံးမိဘဘွဲ့တေးများ Apr 26, '09 3:59 AM
၀၁။ အမေ့ရုပ်ရည် - ဘိုဘို
၀၂။ အဖေ့နေရာ - အီးကေအီး
၀၃။ အရိပ်စစ် - ထူးအိမ်သင်
၀၄။ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမှီ - ဟယ်ရီလင်း
၀၅။ အမေအိမ် - ထူးအိမ်သင်
၀၆။ ဖေဖေ - စိုင်းထီးဆိုင်
၀၇။ အတူတူနေချင်တယ် - သားထွေး
၀၈။ ဖြည့်ဆည်းပြီအိပ်မက် - ညီပုလေး
၀၉။ မေမေ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၁၀။ အဖေ့မျက်ဝန်း - ဂျေမောင်မောင်
၁၁။ ကောင်းကင်မေမေ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၁၂။ ပဲ့ကိုင်ရှင် - ဇော်ဝင်းထွဋ် + စည်သူလွင်
Tags: သားထွေး, စိုင်းထီးဆိုင်, ထူးအိမ်သင်, ဇော်ဝင်းထွဋ်, စည်သူလွင်, ညီပုလေး
မီးမုန်တိုင်း Apr 26, '09 3:38 AM
၀၁။ မီးမုန်တိုင်း - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၀၂။ ဂြိုလ်တစ်ကောင် - ရင်ဂို
၀၃။ အိပ်မက်များရဲ့လွတ်လပ်ခွင့် - ဟေမာနေ၀င်း
၀၄။ မူယာမာယာနှုတ်ခမ်း - ရာဇာနေ၀င်း
၀၅။ ကိုယ်နဲ့မင်း - ဘိုဘို
၀၆။ အကြွင်း - ရင်ဂို
၀၇။ အမြင်စိမ်းနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ - ရာဇာနေ၀င်း
၀၈။ ရပ်တန့်လို့မရနိုင် - အေးချမ်းမေ
၀၉။ ထူးဆန်းတယ် - ကေဇင်ထူးလွင်
၁၀။ မီးမုန်တိုင်း - ဇော်ဝင်းထွဋ်
Tags: ရင်ဂို, ရာဇာနေ၀င်း, ထူးအိမ်သင်, အေးချမ်းမေ, ဇော်ဝင်းထွဋ်, ကေဇင်ထူးလွင်, ဘိုလေး